FAQs - शंघाई Huizhou औद्योगिक कं, लिमिटेड
तपाईका सबै प्रश्नहरूको उत्तर तलको इच्छा राख्नुहोस्।
यदि होईन भने, कृपया हामीसँग सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। हामी तपाईंको अधिक प्रश्नहरूको लागि खुशी छौं।
आइस प्याकका सामग्रीहरू के हुन्?
प्रमुख घटक (%%%) पानी हो। बाँकी पानी अवशोषित बहुलक हो। पानी अवशोषित पोलीमरले पानीलाई ठोस बनाउँछ। यो अक्सर डायपरको लागि प्रयोग गरिन्छ।
के जेल प्याक भित्रका सामग्रीहरू विषाक्त छन्?
हाम्रो जेल प्याक भित्रका सामग्रीहरू गैर-विषाक्त छन् तीव्र मौखिक विषाक्तता रिपोर्ट, तर यो उपभोग गर्नु होइन।
मलाई किन पसिना जेल प्याकहरू विचार गर्नुपर्छ?
कुनै पसिना जेल प्याकहरूले ओसलाई सोखाउँदछन् जसले गर्दा ट्रान्जिटको बखत हुन सक्ने स con्क्रमणबाट उत्पादलाई ढुवानी गरिन्छ।
के ईंटहरू लामो स्थिर रहन्छ？
सम्भवतः, तर त्यहाँ धेरै शिपिंग भ्यारीएबलहरू छन् जसले ईंट वा जेल स्थिर रहनको लागि समयको लम्बाइ निर्धारण गर्दछ। हाम्रो ईंटाको प्राथमिक फाइदा भनेको ईंटाको निरन्तर आकार राख्न सक्ने क्षमता हो र तिनीहरू कडा स्थानहरूमा फिट हुन्छन्।
तपाईंको बरफ प्याक कति लामो हुन्छ?
त्यहाँ धेरै परिवर्तनहरू छन् जसले बरफ प्याकको प्रदर्शनलाई असर गर्छ, शामेल सहित:
प्याकेजिंगको प्रकार प्रयोग भइरहेको छ - जस्तै आइस ईंटहरू, कुनै पसिना आइस प्याकहरू, इत्यादि।
ढुवानीको उत्पत्ति र गन्तव्य।
प्याकेजको लागि अवधि आवश्यकताहरू तोकिएको तापमान दायरामा रहन।
शिपमेंटको अवधिभर न्यूनतम र / वा अधिकतम तापमान आवश्यकताहरू।
जेल प्याक स्थिर गर्न कति समय लाग्छ?
जेल प्याकहरू फ्रिज गर्ने समय मात्रा र प्रयोग गरिएको फ्रिजरको प्रकारमा निर्भर हुन्छ। व्यक्तिगत प्याकहरू केहि घण्टा जति चाँडो स्थिर गर्न सक्दछ। प्यालेटको मात्रा २ 28 दिन सम्म लिन सक्दछ।
के तपाईंको बरफ प्याकहरू शरीरका अंगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ？
हाम्रा उत्पादनहरू परिवेशको लागि चिसो ल्याउन ईन्जिनियर गरिएका छन्। तिनीहरू दुबै खाना र औषधि सम्बन्धी अवसरहरूमा लागू गर्न सकिन्छ।
तपाईको इन्सुलेशन प्याकेजि What कुन उत्पादनहरूको लागि उपयुक्त छ?
हाम्रो इन्सुलेटेड प्याकेजिंग सामग्रीको दायरा सबै तापमान-संवेदनशील उत्पादनहरूका ढुवानीको लागि उपयुक्त छ। हामीले सेवा गरेका केहि उत्पाद र उद्योगहरूमा समावेश छन्:
खाना: मासु, कुखुरा, माछा, चकलेट, आइसक्रिम, स्मूदी, किराना, जडिबुटी र बोटबिरुवा, खाना किटहरू, बच्चा खाना
पेय: वाइन, बियर, शैम्पेन, जुस (हाम्रो खाना प्याकेजि products उत्पादनहरू हेर्नुहोस्)
औषधि: इन्सुलिन, IV औषधि, रगत उत्पादन, पशु चिकित्सा औषधि
औद्योगिक: रासायनिक मिश्रण, बोन्डि agents एजेन्टहरू, डायग्नोस्टिक अभिकर्मकहरू
सफाई र सौन्दर्य प्रसाधन: डिटर्जन्ट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, माउथवश
म कसरी मेरो उत्पादनहरूको लागि उत्तम प्याकेजि choose छनौट गर्दछु？
जस्तो कि प्रत्येक तापमान-संवेदनशील उत्पाद प्याकेजिंग अनुप्रयोग अद्वितीय छ; तपाईं सन्दर्भको लागि हाम्रो घर पृष्ठ "समाधान" जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, वा कल गर्नुहोस् वा हामीलाई विशेष सिफारिशहरूको लागि आज तपाइँको उत्पादन लदानलाई सुरक्षित गर्न को लागी हामीलाई ईमेल गर्नुहोस्।
के म प्याकेजिंगमा मेरो आफ्नै कम्पनी लोगो समावेश गर्न सक्छु?
हो। अनुकूलन मुद्रण र डिजाइनहरू उपलब्ध छन्। केहि न्यूनतम र अतिरिक्त लागत लागू हुन सक्छ। तपाईंको बिक्री सहयोगी अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान गर्न सक्दछ।
के हुन्छ यदि मैले खरिद गरेका उत्पादहरू मेरो अनुप्रयोगको लागि काम गर्दैनन् भने What
हामी १००% ग्राहक सन्तुष्टिको ग्यारेन्टी दिन सक्दो प्रयास गर्दछौं।
धेरै जसो समय, हामी सिफारिस गर्दछौं किन्नु भन्दा पहिले हाम्रो उत्पादनहरू परीक्षण गर्न। हामी खुशीसाथ परीक्षणको लागि नमूनाहरू प्रदान गर्नेछौं कुनै शुल्क बिना, यो सुनिश्चित गर्न को लागी, हाम्रो प्याकेजिंग तपाईंको विशेष अनुप्रयोगको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
के म आइस प्याक पुन: प्रयोग गर्न सक्छु?
तपाईं हार्ड प्रकारको पुन: प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको सफ्ट प्रकार पुन: प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न यदि प्याकेज काटिएको छ।
म कसरी बरफ प्याकहरू फ्याँक्न सक्छु?
व्यवस्थापनको आधारमा डिस्पोजल विधिहरू फरक हुन्छन्। कृपया तपाइँको स्थानीय अधिकार संग जाँच गर्नुहोस्। यो डायपरको जस्तो सामान्य तरीका हो।